+1000 Kitapo borosy Photoshop | Famoronana an-tserasera
+1000 Kitapo borosy Photoshop maimaim-poana
Ao amin'ny tranonkala dia misy habaka be dia be izay ahitantsika ireo karazana kojakoja manana kalitao azo ekena amin'ny asantsika. Anisan'ireo fitaovana ireo ny borosy izay tena ilaina mba hahafahany mampivelatra karazan-tsoratra sy sanganasa samihafa. Indrindra eo amin'ny sehatry ny fanodinkodinana sary dia tena hahasoa antsika izany. Androany aho te-hanome anao fanomezana kely misy fonosana borosy arivo mahery amin'ny karazany rehetra hiasa amin'ny Adobe Photoshop.
Azoko antoka fa mihoatra ny indray mandeha ianao dia tsy maintsy nandeha nitady Internet fa tsy borosy izay mifanaraka amin'ireo tetikasa novolavinao. Ao amin'ny pejy avelako anao ao amin'ny lahatsoratra anio, azonao atao ny misintona fonosana loharano azo avy amin'ny karazan'olona maherin'ny 1000 ary ny tsara indrindra dia ny mampidina azy ireo malalaka, izany hoe azonao atao maimaimpoana tanteraka izy ireo. Ny ankamaroan'ireo borosy mandrafitra ireo fonosana dia avo lenta, mba hahafahanao mampiasa azy ireo amin'ny canvas anao na inona na inona ny refy ary tsy manary kalitao kely.
Raha tsy misy holazaina bebe kokoa, manantena aho fa ho hitan'izy ireo fa mahasoa izy ireo ary hahafantatra ny fomba hitrandrahana betsaka azy ireo. Toy ny mahazatra, raha fantatrao fa misy banky loharano hafa mety ilaina amin'ny vondrom-piarahamonina mpamorona na te hanoro fonosana manokana izay nahasoa anao ianao dia mila mampiasa ilay boaty fanehoan-kevitra hita etsy ambany fotsiny ianao.
Borosy maimaim-poana 1000 ho an'ny Adobe Photoshop.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » borosy » +1000 Kitapo borosy Photoshop maimaim-poana
Rody dia hoy izy:
Mamaly an'i Rody
Tsenan'ny Envato: tsena an-tserasera 6 hivarotana ny volavola anao
Fanontana sary avo lenta Inona no tsy maintsy raisiko mba hiasa amin'ny vahaolana avo lenta?